मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नुहुन्छ ? झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती - राेल्पा न्युज
मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नुहुन्छ ? झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती
राेल्पा न्युज calendar_today १० बैशाख २०७७, 6:41 am
काठमाडौं । कोभिड-१९ अर्थात काेरोनाभाइरसका कारण अहिले देश लकडाउनमा छ । यस्तो अवस्था साइबर अपराधीहरुको बिगबिगी बढ्नसक्ने चिन्ता बैंकहरुलाई थपिएको छ ।
बैंकहरुले आफ्ना सेवाग्राही साइबर अपराधीको निशानामा पर्नसक्ने जोखिमको अन्दाज गरेर सचेत गराइरहेका छन् ।
यस्तोमा अपरिचित कलहरु आउने सक्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरुले आफू बैंकको प्रतिनिधि भएको झूठो आश्वासन दिई महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जानकारीहरु हात पार्नसक्ने चेतावनी दिएका उनीहरुले दिइरहेका छन् ।
त्यसैले आफ्नो अनलाइन बैंकिङ पासवर्ड, वान टाइम पासवर्ड (ओटीपी कोड), मोबाइल पीन, एटीएम पीन जस्ता संवेदनशील र गोप्य जानकारीहरु कसैसँग पनि सेयर नगर्नुहोस् ।
बैंकले त्यस्ता संवेदनशील जानकारीहरु सेवाग्राहीबाट कहिल्यै पनि नमाग्ने भएकै कारण त्यस्तो माग आएको खण्डमा जानकारी शेयर नगर्न सेवाग्राहीलाई आह्वान गरिएको हो ।
साथै बैंकले त्यस्ता संवेदनशील जानकारीहरु फोन, भाइबर, ह्वाट्सए एप कल, तथा कुनै पनि अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सेयर नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
यदि त्यस किसिमका कल तथा म्यासेजहरु आएको खण्डमा बेवास्ता गर्नु नै सबै भन्दा राम्रो उपाय हुनेछ । आफ्नो अकाउन्टमा अस्वभाविक ट्रान्जेक्सन भएको आशंका लाग्ने बित्तिकै सम्बन्धित बैंकको शाखामा फोन सम्पर्क गर्न गर्नुहोस् ।